मत्स्येन्द्रनाथको रथ यात्राबारे ललितपुरका १९ जातीय संगठन अनविज्ञ ! – Mero UK
मत्स्येन्द्रनाथको रथ यात्राबारे ललितपुरका १९ जातीय संगठन अनविज्ञ !
काठमाडौं । आफूलाई जानकारी नै नदिई केही युवाहरुले रातो मत्स्येन्द्रनाथ रथयात्रा सुरु गरेकोको विषयमा ललितपुरको १९ जातीय संगठनले अनविज्ञता जनाएका छन् । यस विषयमा छलफल गर्न ती संगठनका प्रतिनिधिको आकस्मिक बैठक बोलाइएको छ ।
ज्यापु समाजको संयोजनमा बिहीबार दिउँसो ३ बजे भोलढोकास्थित ज्यापु प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा ललितपुरमा रहेका १९ वटै जातीय संगठनको आकस्मिक बैठक बस्न लागेको ज्यापु समाजका अध्यक्ष चन्द्र महर्जनले अनलाइनखबरलाई जानकारी दिए ।
महर्जनले आफूहरूलाई रथयात्राको बारेमा जानकारी नै नदिई कसले रथ तान्न त्यति मान्छे भेला भए भन्ने विषयमा समेत बैठकमा गम्भीर छलफल हुने बताए । ‘हामीले त कोरोना महामारीका कारण संक्षिप्त विधि पूरा गरेर रथयात्रा गर्ने प्रस्ताव पनि गरेका थियौं । ज्योतिषहरूले मानेनन् । अहिले आएर कसले रथयात्रा गर्‍यो त्यसमा हामीलाई कुनै जानकारी छैन । अब जातीय संगठनको बैठकले जे निर्णय गर्छ त्यही गर्छाैं ।’
महर्जनले बिहान ८ बजे नै बैठक बसेर आफूहरूले बिहीबार दिउँसो बस्ने गुठी संस्थानको निर्णय अनुसार रथयात्राको काम अघि बढाउने भनेपनि साढे नौ बजे एक्कासी भिड जम्मा भएर रथयात्रा गरेको भन्दै त्यसमा आफूहरूको संगठनको कुनै संलग्नता नरहेको उनले बताए ।
बिहीबार दिउँसोको लागि बोलाइएको सो आकस्मिक बैठकमा ज्यापु समाज,
वीरगञ्जमा ५ जनाले गरे प्लाज्मा दान